Sheekh Shariif oo ka qayb galaya shirka madaxda Afrika ee Adis Ababa (SAWIRO) – SBC
Sheekh Shariif oo ka qayb galaya shirka madaxda Afrika ee Adis Ababa (SAWIRO)
Posted by editor on Janaayo 30, 2012 Comments
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ah hogaamiyeyaasha Afrikaanka ee shirku uga socdo magaalada Adis Ababa ee caasimada Itoobiya ayaa kulamo gooni gooni ah la yeeshay madaxda ka qayb galaysa shirkaasi qaarkood, iyo wafduud kale oo heer caalami ah oo shirka furitaankiisa ka soo qayb galey.
Shirkan oo ah kii 18-aad ee ay isagu yimaadaan madaxda ururka midowga Afrika ayaa ka furmay xarunta cusub ee ururka midowga Afrika taasi oo ah dhisme casri ah oo ay dhistey dawlada Shiinaha ay bixisay qarashka ku baxay oo gaaraya 200 milyan oo doolar.
Midowga Afrika oo uu aasaaskiisa lahaa hogaamiyihii la diley ee dalka Liibiya Col. Mucamar Al-Qadaafi oo isagu maskax, maal iyo muruq fara badan ku bixiyey sidii qaarada Afrika u midoobi laheyd una yeelan laheyd wax wada qabsi, hase yeeshee dawlada Shiinaha ayaa shafka haatan u garaacdey sidii ay u garab itaagi laheyd Afrikada dagaalada, faqriga, cudurka iyo jahligu la degay.
Dhismahan oo quraarado ka sameysan wuxuu leeyahay fadhi 2500 kuraad ah, waxaaan la sheegay in dawladu Shiinuhu ay deeq ahaan ugu tala gashay ururka midowga Afrika ee ay ka kooban yihiin 54-ta wadan oo ay ugu dambeysay dawlada Koonfurta Suudaan.
Shiinuhu wuxuu balanqaaday in sadexda sano ee soo socota uu $ 94 milyan oo doolar oo dheeraad ah uu ku taageerayo ururkan oo sanadkii qarashkiisu gaarayo $ 270 milyan oo doolar.
Liibiya waxay bixin jirtey 15% dakhligaasi sidoo kale waxay ka bixin jirtey qarashaadka qaaranka ururka ee lagu soo qoro wadamada saboolka ah, hadaba iyadoo fikirkii Qadaafi ee Afrika caawinta uu meesha ka baxay, waxaa hada garan ula diyaar ah Afrika wadanka Shiinaha oo 8-dii sano ee la soo dhaafay ku bixiyey maalgalinta dhaqaalaha wadamada Afrika $ 15 bilyan oo doolar, iyadoo guud ahaan dhaqaalaha maalgashiga ah ee Shiinaha ka galay Afrika uu dhan yahay $ 490 bilyan oo doolar.
Sidoo kale dawlada Shiinaha waxay u bixiyeen 4.5 milyan oo taageero ay siiyeen hawlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid ah hogaamiyeyaasha shirka ka qayb galaya ayaa dadkii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa xoghyaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon, iyo masuuliyiin ka tirsan dawladaha Mareykanka & Ingiriiska iyagoo isla soo qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya.